मित्र या प्रेमिका संग एक साथ स्नान | बौछारमा कामुक
सबै कुरा सम्भव छ, केही गर्न सकिएन। बौछारमा कामुक
एक साथ बौछार को लाभ
कुन जोडीले थाहा छैन: परिवारको रोजगारीको जीवनमा हलचल र हलचलमा प्रायः गायब हुन्छ, पिता र आमा एक-अर्काको लागि समय लिन्छन्। बच्चाहरू रोजगारीको जीवनमा शासन गर्छन्। बसोबास गर्न धेरै छ र धेरै महिलाहरू, तिनीहरूको छेउमा मानिस जस्तै, पूर्ण रूपमा उनीहरूको व्यावसायिक जीवनमा।
प्रेमिका र मित्रको साथ एकसाथ बस्दै
दुर्व्यवहार छैन, एकअर्काको लागि न्यानो, जुन हरेक जोडे हरेक दिन सबै भन्दा राम्रो हुन्छ, यहाँ पीडित छैन? कुनै पनि शारीरिक नजिकता एक असल सम्बन्धको आधार हो। हामी दैनिक जीवनमा किन बिर्सन्छौं, यो सम्झना र सबै भन्दा माथि, यसलाई बाँच्न को लागी?
प्रेमिका वा मित्रको साथमा एकान्त गर्नुहोस्
हरेक दिन पारिवारिक जीवनमा कसरी सहज कामुकता छ
त्यहाँ सधैँ समय र स्वतन्त्रताको कमी छैन जो जुत्ताको साथ एक जोडिको रूपमा आदानप्रदान गर्न। निजी बेडरूम प्रायः बच्चाहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ जुन वास्तव मा ध्वनि रहित दरवाजा संग सुसज्जित छैन।
रोजगारीको जीवनमा प्रायः सम्भव छैन कि एक जोडीको रूपमा कामुकता हो जुन धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। साँझमा हामी धेरै समय सँगै बिताउन थियौं। के हामीले अर्को दिन चाँडै उठ्नु हुँदैन?
स्पष्ट रूपमा किन यो एकसाथ सँगै स्नान गर्न को लागी एकजुट को समय प्रयोग गर्न को लागी प्रदान गर्दछ।
यो कुरामा फरक छैन कि दम्पतीले एकै ठाउँमा वा बिहानै एकैसाथ एक साथ लिन्छ: शरदमा यो वास्तवमा झिंगो हुन सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि कुनै महिला वा कुनै व्यक्तिले आफैले दबाबमा पर्दा आफ्नो साथीको साथ स्नानमा जान्छ।
कसलाई थाहा छैन: सबै कुरा गर्न सक्छ, केहि पनि हुँदैन? प्रायः तौलियामा एक-अर्कालाई असाध्यै राम्ररी लाग्छ, पानीले दम्पतीमा डुबाउँदा तपाईंको पछाडि स्पंजलाई रगत पुर्याउँदछ। सबैले यस पलको आनन्द लिनुपर्छ र पर्खनुहोस् र के हुन्छ भने हेर्नुहोस्।
भित्ता प्राय: छिटो जान्छ भने: आमा र बुबा बिना बिरुवाको दबाब बिना जान पर्छ। दबाब कामुक कामुक हत्यारा उत्कृष्टता हो। जोन र दुर्व्यवहार संग साझा स्नान को लागी जो कोहीले शोक वा कामुक चुंबन दिनेछ। यो स्वचालित रूपमा हुन्छ।
पार्टनर र पार्टनरको साथ साथ साथ
कुनै जोडी जो एक-अर्काको सामना गर्दै छन्, स्नानको स्थानको रूपमा, स्वचालित रूपमा धेरै नजिक हुन्छ। यो नजिकताले सेक्सको लागि उत्तम टिकट प्रदान गर्न सक्छ। यदि तपाइँ पहिले प्रेरणाजनक सुगन्ध जेलको साथ गहन प्रेरणा लिनुभयो भने, तपाईं नजीक आनन्दको आनन्दित अनुभव अनुभव गर्नेछौं। हामी यसलाई मौकामा छोड्न चाहँदैनौं, के हुनेछ?
एक साथ, वायुमंडलीय तैयारी संग बौछार
निस्सन्देह, तपाईं स्नान गर्न सक्नुहुन्छ ताकि यसले कामुकको लागि उत्तम वातावरण प्रदान गर्दछ। त्यहाँ विशेष अनुभव पर्दाहरू छन् जुन आवश्यक भन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा मात्र पटक्कै हुँदैन।
यदि तपाईलाई आफैंलाई पानीबाट लाइट स्ट्रिमबाट प्रेरित गरौं भने, क्षणको आनन्द लिनुहोस्। वहाँ कुनै परेशान जल शोर छैन, एक सनरी बौछार जल जेट को स्थापना मा बहुमुखी छ।
त्यसैगरी, कोहीले स्नानमा स्नानको साबुनको रूपमा प्रेरणादायक चिन्तन राख्न सक्दछ। यसैले, साथी जोडिदिनुस् र यसको विपरीत बरु कुनै पनि महिलाले मस्तिष्कको मूडमा खस्न सक्छ। केहि कुराको लागि होइन: म अर्को राम्रो गन्ध लगाउन चाहन्छु। कामुक स्क्यानले दम्पतीलाई बौद्धको नजिक राख्न प्रेरित गर्छन्।
कसले बाथरूममा मूड प्रकाश प्रदान गर्दछ, प्रेरणा लिन सक्छ। पुरुष र महिलाले बच्चा र परिवार वरपरको दैनिक जीवनको तनावबाट पूर्ण रूपमा स्विच गर्न सक्छ।
अधिक रोमान्स एक साथ स्नान गरदैछ
स्नानमा कामुक सेन्सरको जोडीको फाइदा निम्नानुसार छ: पटरिंग पानीको आवाज बाह्य संसारको धारणा विरुद्धको सुरक्षा गर्दछ। यस शवर को अनुष्ठान पूर्ण पहिल्यै योजना गर्न छैन। एक महिलाको रूपमा कसले प्राय: स्नानमा सहभागीमा सहभागी हुन चाहँदैन? कुन नग्न पत्नीले आफ्नो नग्न पत्नीको भ्रमण गर्दा कदर गर्दैन? प्रायश्चितता ट्रम्पहरू हो।
पार्टनर वा पार्टनरसँग सँगै बस्दै
प्रत्येक साझेदारले एकता र सहनशीलताको आनन्द लिनुपर्छ। यसबाट के हुन सक्छ? कसैले पनि कामुक टिकटको रूपमा प्रारम्भिक टिंगलिंगलाई विचार गर्न सक्छ।
तर के यो स्नानमा एक साथ हँसिलो अचम्म छैन र एकअर्काको लागि केहि समय छ? बाथरूम मा स्नान कक्ष को निकटता आदर्श हो!
जुनूनहरू नयाँ ठाउँहरू चर्कन्छन्
त्यहाँ कारण हुन सक्छ किनकि शरिर निस्सन्देही आदानप्रदान गर्ने आदर्श स्थान होइन। रिश्तेमा जुनसुकै जीवन बिताउन महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ कुनैपनि कुरा होइन।
यदि तपाईं एक दम्पतीको रूपमा एक दम्पती वा प्रकृतिमा यात्राको लागि आफ्नो समय लिनुहुन्छ भने, तपाईं नयाँ जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ जुन प्रेम जीवनलाई प्रेरित गर्दछ। दबाव र दबाब बिना यो बाटो महत्त्वपूर्ण छ।
प्रत्येक जोडीले जहाँ कामुकता बाहिर रहन चाहानुहुन्छ र यसको लागि उत्तरदायी छ। के हरेक जोडीले उनीहरूको व्यक्तिगत जुनून पाउँछ भन्ने कुरा ठीक छ?
प्रेमिका वा मित्रको साथ एकै ठाउँमा जानुहोस्
मित्र या प्रेमिका संग एक साथ स्नान | कामुकता
कामुक कविता | प्रेम सहभागी प्रेम
धूम्रपान रोक्नुहोस् - गैर धूम्रपान नगर्नुहोस्
सम्मोहन मार्फत धूम्रपान रोक्नुहोस्
धूम्रपान रोक्नुहोस् | स्वास्थ्य
हटाउने लक्षणहरू बिना धूम्रपान रोक्नुहोस्
पृष्ठ पृष्ठ मोडेल लेडिङमा क्याथोवाकमा
खेतीमा पृष्ठ घोडाहरू रङहरू
दन्त चिकित्सक को डर | स्वास्थ्य
Soulsex | कामुकता कामुक